Umaki: infographic | Martech Zone
Iyini I-Digital Asset Management (DAM) Platform?
ULwesine, April 7, 2022 ULwesine, April 7, 2022 UNicolás Jiménez
Ukuphathwa kwempahla yedijithali (i-DAM) kuhlanganisa imisebenzi yokuphatha nezinqumo ezihambisana nokungeniswa, isichasiselo, ukwenza ikhathalogi, ukugcinwa, ukubuyisa, nokusatshalaliswa kwezimpahla zedijithali. Izithombe zedijithali, ukugqwayiza, amavidiyo, nomculo kuyisibonelo sezindawo eziqondiwe zokuphathwa kwempahla yemidiya (isigaba esingaphansi se-DAM). Kuyini Ukuphathwa Kwempahla Yedijithali? Ukuphathwa kwempahla yedijithali I-DAM kuwumkhuba wokuphatha, ukuhlela, nokusabalalisa amafayela emidiya. Isoftware ye-DAM yenza amabhrendi akhe umtapo wezincwadi wezithombe, amavidiyo, ihluzo, ama-PDF, izifanekiso, nokunye.
Iyini i-Infographic? Yiziphi Izinzuzo Zesu Le-Infographic?
ULwesithathu, April 6, 2022 ULwesine, April 7, 2022 Douglas Karr
Njengoba uphenya ezinkundleni zokuxhumana noma amawebhusayithi, ngokuvamile uzofika kweminye yemifanekiso yolwazi eklanywe kahle enikeza ukubuka konke kwesihloko noma ehlukanisa amathani edatha ibe yisithombe esihle, esisodwa, esishunyekiwe esihlokweni. Iqiniso liwukuthi… abalandeli, ababukeli, nabafundi bayabathanda. Incazelo ye-infographic iwukuthi... What Is An Infographic? I-Infographics iwukumelwa okubonakalayo okuyingcaca kolwazi, idatha, noma ulwazi okuhloswe ngalo ukwethula
Iyini i-Backlinking? Ungawakhiqiza Kanjani Ama-Backlink Ekhwalithi Ngaphandle Kokubeka Isizinda Sakho Engcupheni
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 1, i-2022 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 1, i-2022 Douglas Karr
Uma ngizwa othile ekhuluma ngegama elithi backlink njengengxenye yesu lokumaketha kwedijithali, ngivame ukudikibala. Ngizochaza ukuthi kungani ngalokhu okuthunyelwe kodwa ngifuna ukuqala ngomlando othile. Ngesinye isikhathi, izinjini zokusesha zazivame ukuba izinkomba ezinkulu ezazakhiwe ngokuyinhloko futhi zahlelwa njengohlu lwemibhalo. I-Pagerank Algorithm ye-Google iguqule isimo sosesho ngoba yasebenzisa izixhumanisi zekhasi okuyiwa kulo njengesisindo sokubaluleka. A
Iyini inhloso yokuphuma? Isetshenziswa Kanjani Ukuze Kuthuthukiswe Amazinga Okuguqulwa?
NgoLwesithathu, ngoMashi 30, 2022 NgoLwesithathu, ngoMashi 30, 2022 Douglas Karr
Njengebhizinisi, utshale ithoni yesikhathi, umzamo, kanye nemali ekwakheni iwebhusayithi enhle noma isiza se-e-commerce. Cishe wonke amabhizinisi nabamakethi basebenza kanzima ukuze bathole izivakashi ezintsha esizeni sabo… bakhiqiza amakhasi omkhiqizo amahle, amakhasi okufika, okuqukethwe, njll. Isivakashi sakho sifike ngoba besicabanga ukuthi unezimpendulo, imikhiqizo, noma izinsiza obuzifunayo. okwe. Nokho, izikhathi eziningi kakhulu leso sivakashi siyafika futhi sizifunde zonke
Amasu we-SEO: Ungasithola Kanjani Isikhundla Sebhizinisi Lakho Kusesho Lwezinto Eziphilayo ngo-2022?
NgoMsombuluko, Mashi 28, 2022 NgoMsombuluko, Mashi 28, 2022 Douglas Karr
Sisebenza neklayenti manje elinebhizinisi elisha, uhlobo olusha, isizinda esisha, kanye newebhusayithi entsha ye-ecommerce embonini eqhudelana kakhulu. Uma uqonda ukuthi abathengi nezinjini zokusesha zisebenza kanjani, uyaqonda ukuthi akuyona intaba elula ukuyikhuphuka. Amabhrendi nezizinda ezinomlando omude wegunya kumagama angukhiye athile anesikhathi esilula kakhulu sokugcina ngisho nokukhulisa izinga lawo lemvelo. Ukuqonda i-SEO ngo-2022 One